Wuxuu bilaabayaa talaabo adag oo ah 2019 World Geospatial Forum ee Amsterdam - Geofumadas
Abriil, 2019 Geospatial - GIS, tabo cusub
April 2 2019, Amsterdam: Geospatial World Forum (GWF) 2019, ugu filayo dhacdo bulshada geospatial caalamka bilaabay shalay ka dhacay Art Taets ah & Event Park ee Amsterdam-ZNSTD. Munaasabadan ayaa waxay bilaabeen inay in ka badan ergooyinka 1,000 75 ka wadan oo soo ururay in ay is dhaafsadaan aqoonta ku saabsan sida loo noqdo pervasive nolol maalmeedkeena geospatial iyo sida loo eryi abuurnimo waaxdan. Maalintii ugu horraysay ee forum saddex maalmood ah (2 ku 4 in April), kaas oo ah kulan sanadle ah oo xirfadley iyo hoggaamiyeyaal ka dhigan deegaanka oo dhan geospatial, bilaabay kulan loo dhan yahay ee #GeospatialByDefault: Awoodsiinta balaayiin, arrinta Shirka sanadkan. Shirka ayaa sidoo kale ka mid ahaa ka qaybgalka bandhigyada 45.
Si aad u bilowdo shirka, Dorine Burmanje, Madaxweynaha Kadaster, Netherlands, wadajir ah u martigeliyay shirka, carabka ku adkeeyay in beesha geospatial u baahan yahay kala duwanaanshaha more: ardayda, soo baxaya ganacsatada, haweenka iyo dadaallada ee dalalka soo koraya loo xaqiiqsado culayska dhabta ah ee tiknoolajiyadaan iyo sameynta dhaqdhaqaaqa "dhaqaalaha caadiga ah" ee guulaysta. Wuxuu sidoo kale ku booriyay mas'uuliyiinta dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay in ay bixiyaan "xogta la isku halleyn karo" si loo helo horumar waara, iyo sidoo kale inay u helaan dadka kale ee muhiimka ah.
Muujinayo sida teknoolajiyada geospatial kaalin kala go'lahayn ka qabashada qaar ka mid ah caqabadaha dunida, Madaxweynaha Esri iyo Madaxweynaha Golaha World of Warshadaha Geospatial ah, Jack Dangermond, ayaa sheegay, "Waxaan u socdaan jihada dunida ah in aheyn badala , oo abuuraya dhibaatooyin badan iyo hanjabaadda nolosheena ». Waxaan u baahannahay inaan bedelno fahamkeena adduunka iyo sida aan u gutno waajibaadkeena iyo tiknoolijiyadaan jaan-gooyadu waxay bixisaa hannaanka ugu wanaagsan ee si deg-deg ah loogu qiyaaso shaqadan, adduunkana si fiican u sii noolaanno ".
Danjiraha Hindiya ee Nederland, Venu Rajamony ayaa sidoo kale ka mid ahaa af-hayayaasha ugu sarreeya maalinta furitaanka. Iyadoo uu carabka ku adkeeysan yahay qaabka siyaasadeed ee ka jira Hindiya, wuxuu sheegay in warshadaha khaaska ah ay kaalin weyn ka ciyaaraan halkaas. "India waxay aaminsan tahay in horumarka uu yahay ujeeddada ugu muhiimsan, iyo in la sameeyo dhab ah, waxaa jira baahi loo qabo in la boodo marka la eego tiknoolijiyada, iyo farsamooyinka geospatial ayaa kaalin muhiim ah ka ciyaaraan."
Shirkii labaad ee guud, oo uu dhexmaray Warbaahinta Geospatial iyo Isgaarsiinta, Maamulaha Sanjay Kumar, ayaa dood ka yeeshay sida tiknoolijiyada casriga ah ay kaalin muhiim ah ka qaadan karaan digitization ee qaybta dhismaha. Guddi ka kooban afar af-soomaali oo uxaqiijiyay ayaa ka wada shaqeynayay hawlaha wada shaqaynta iyo moodooyinka ganacsiga: mustaqbalka injineernimada dijital ee suuqa Sare.
"Xogta qarsoodiga ah ayaa si weyn loogu soo koobay xalal diiradda saaraya qaabka waqtiga dhabta ah. Waxaa jira hawlgal shaqo oo u dhexeeya qabashada macluumaadka wax ku oolka ah ee loogu talagalay qaabaynta qaabdhismeedka jireed iyo kan kale, "ayuu yiri Steve Berglund, madaxweynaha iyo agaasimaha Trimble. Sii wadista wada hadalka, BVR Mohan Reddy, oo ah agaasimaha Caynent, Hindiya, ayaa yiri: "Daabacaadda Digital waa cusboonaysiinta waayeelka iyo dhismaha cusub iyo waa mashiinka kobcinta cusub ee suuqa AEC, isbedelka warshadaha."
Andreas Gerster, Madaxweyne Ku-Xigeenka Gurmadka Caalamiga ah ee BIM-CIM, FARO, Jarmalka, ayaa sheegay in mashaariicda dhismaha ay sii kordhayaan oo qaali yihiin, iyo si loo fududeeyo, jawaabta kaliya waa is-dhexgalka tiknoolajiyada.
Kalfadhiga 3-aad ee kal-fadhiga maalintii ayaa diiradda lagu saaray 5G + Geospatial - Conformation of magaalooyin dijital ah. Mohamed Mezghani, Xoghayaha Guud ee Xiriirka Caalamiga ah ee Gaadiidka Dadweynaha ee Beljimka wuxuu ka hadlay sida ay hay'addaha gaadiidka adduunka oo dhan ay u qaadanayaan teknolojiyadda geospatial. Malcolm Johnson, Kuxigeenka Xoghayaha Guud ee Ururka Isgaarsiinta Caalamiga (ITU), Switzerland, ayaa yiri: “ITU waxay leedahay door muhiim ah inay ka ciyaarto dhaqaalaha dijitaalka ah; Kaqeybgalayaasha ITU waxay rabaan inay iskaashi la yeeshaan warshado kala duwan. Marka laga hadlayo magaalooyinka caqliga leh, waxaan u baahanahay inaan si iskaashi leh ula shaqeeyo gaar ahaan dhanka tikniyoolajiyada iyo halbeega ”
Wim Herijgers, Agaasimaha Group, Digital curinta iyo Technology Fugro, ayaa yiri: "Foundation Digital waa xogta digital, da'ayeen iyo juqraafi of qaab afar-geesood ah, kaas oo ujeedadiisu tahay in ay bixiyaan macaamiishu la faham qoto dheer oo ka mid ah goobaha iyo hantida »Ayuu yiri. dheeraad ah Frank Pauli, CEO of CycloMedia, sharxay sida aqoonta geospatial waa furaha qorshaynta network for 5G heerka aan horay loo arag, iyo in streamlines design iyo hantida maamulka, iyo waxay bixisaa immersive, aragti ah superimposed iyo Muujinta darajada go'aaminta guuleysiga.
Kalfadhiga ugu dambeeya ee maalintii ayaa diiradda saarey awoodda la wadaago: Goobaha aqooneed ee Geospatial Dhismaha dhaqaalaha waara. Dood-wadaagayaashu waxay ka doodeen in qarniga 21-aad uu yahay taariikhda magaalooyinka waaweyn iyo sida aan u wada shaqeyno si aan uga caawinno dhisidda magaalo iyo magaalooyin caqli badan oo waari kara, tiknooloojiyada geospatial waxay gacan ka geysan kartaa furitaanka fursado badan oo horumarineed. Dr. Virginia Burkett oo ka tirsan USGS iyo Anna Wellenstien oo ka tirsan Baanka Adduunka, ayaa diiradda saaray sida macluumaadka ugu muhiimsan dhaqaalaha isbeddelka dhaqaale iyo baahiyaha geospatiga ee baahida dhaqaale ee dalalka. Wakiilka Wakiilada ee Gobalka Geospatial, Boqortooyada Ingiriiska, ayaa sidoo kale xoojiyay qiimaha dhaqaale ee juqraafiigu ku daro dalkiisa. Paloma Merodio Gómez, Madaxweyne Ku-Xigeenka, INEGI, Mexico, ayaa cusbooneysiiyey xaaladda dhaqaalaha, tirada dadweynaha iyo guryaha iyo kaalinta asaasiga ah ee ay ka ciyaaraan tiknoolijiyada casriga ah.
Mashruuca furan ee ELS waxaa bilaabay Mick Cory, Xoghayaha Guud iyo Agaasimaha Fulinta ee EuroGeographics. EuroGeographics waxay billaabeen adeegyadii ugu horeeyay ee xogta ee Mashruuca Open Location Location Adeegyada (ELS) ee Golaha Waddanka ee Geospatial. Macluumaadka Mashruuca Furan ee Furan wuxuu siinayaa tallaabada ugu horreysa ee lagu helo faa'iidooyinka dhaqaale iyo bulshadeed ee macluumaadka loo oggol yahay ee xubnaha GGGografi, Qaranka Qaranka, Qalabka Nidaamka Diiwaangelinta iyo Maareynta Dhulka ee Yurub.
Labadii maalmood ee soo socda, in ka badan 1,000 ergooyinka, in ka badan baananku 200 iyo saraakiisha dawladda ka tirsan in ka badan 75 GWF dalalka u isticmaali doonaa madal si ay ula falgalaan iyo wada shaqayn, iyo muujiyaan riyadiisii ​​si wadajir ah bulshada caalamiga ah ee geospatial.
Wixii ku saabsan Forum Geospatial World: Forum Geospatial Forum waa mashruuc wada shaqeyn iyo isdhexgal oo muujinaya aragti wadajir ah oo la wadaago bulshada caalamka geospatial. Waa shir sannadeed oo ka mid ah xirfadlayaasha geospatial iyo hoggaamiyeyaasha wakiil ka ah dhammaan habka deegaanka deegaanka. Waxaa ka mid ah siyaasadaha dadweynaha, hay'adaha qaranka ee kartoomyada, shirkadaha gaarka loo leeyahay, ururrada caalamiga ah ee horumarinta iyo horumarinta, machadyada cilmiga iyo cilmiga, iyo weliba, dhammaan dadka isticmaala kama dambaysta ah ee dawladda, ganacsiga iyo adeegyada muwaadiniinta.
La xiriir saxaafadda
Post Previous«Previous GRAPHISOFT waxay magacawday Agaasimaha Fulinta Huw Roberts
Post Next #GIS - ArcGIS Pro Course - laga bilaabo xoqNext »